Ieperile zamanzi amatsha
Amanzi aPearl Ieperile zamanzi acocekileyo zibhekisa kwieperile eziveliswa emilanjeni nasemilanjeni. Iindawo eziphambili zokuzala kweeperile e-China yi Zhuji, Changde, Suzhou, Jiangxi, Hubei, kunye ne Anhui. Okwangoku, iiperile zamanzi amnandi ikakhulu ...
Umthombo wePearl iTshayina ngumvelisi ophambili weeperile zamanzi, kwaye iziphumo zawo zibanga iipesenti ezingama-95 zeziphumo zehlabathi. Ukuchuma nokuphuhliswa kwemveliso yeeperile kubonelela ngamathuba okuqhubeka kokusebenza kweChine ...
Iimpawu ezibonakalayo zeeperile
Iimpawu ezibonakalayo zeeperile Ukuqaqamba okungafaniyo kweeperile kubangelwa kukukhanya kunye nokusasazeka kokukhanya kula macala acacileyo e-nacreous. Ubuncinci be-nacreous layer, the gloss is beautiful. Ukubengezela ...
Amanyathelo okhuseleko okunxiba kunye nokugcina ieperile
Amanyathelo okhuseleko okunxiba kunye nokugcina ieperile ngexesha lokunxiba. Ieperile mazingachukumisi manzi rhoqo, kwaye kufuneka zisuswe xa kuhlanjwa. Ieperile zinxibelelana neasidi kunye nealkaline detergents ezinje ngeshampoos ...
Unonophelo lweZacholo kunye noLumkiso: UbuGcisa boLwakhiwo
Unonophelo kunye noLumkiso ngeZacholo: I-Allergy ye-jewelry Beka izacholo zakho ekugqibeleni, uzisuse kuqala. Soloko ususa ubucwebe bakho xa usenza umthambo kwaye uqubha, kwaye usenza imidlalo. Rhoqo coca iigugu zakho ngelaphu lokucoca. Gcina ij ...
Ubume beeperile zamanzi amatsha
Ubume beeperile zamanzi acocekileyo Ieperile zamanzi amdaka ziza phantse ngokungenamda kweemilo ukusuka kumjikelo wolingano ukuya kwi-baroque nayo yonke into ephakathi. Ngenxa yokufumaneka kwazo kunye namaxabiso afikelelekayo aphakathi kwezona ...
Indlela yokwahlula phakathi kweeperile zamanzi amatsha
Indlela yokwahlula phakathi kweeperile zamanzi amdaka # 1. Ukuqaphela Ukwahlula ngombala, imilo, ubungakanani kunye nokubengezela kweperile. Iiparele zokwenyani, umbala, imilo, kunye nobungakanani azifani ncam. Iiperile ezingezizo ziphoswe ngomatshini ngom ...
Iziphumo zokunxiba izacholo zeeperile
Iziphumo zokunxiba izacholo zeeperile Abasetyhini bathanda ukunxiba ubucwebe beeperile kwelinye icala kuba mellow kwaye kushushu, okunokudlala indima entle kakhulu yokuhombisa, kwelinye icala, kuba inexabiso elithile ...